Forex တွင်ပြန့်နှံ့နေသောအရာ - Forex Trading တွင်ပြန့်နှံ့ရှင်းလင်းချက်
ပညာရေး - ဆောင်းပါးများနှင့်သင်ခန်းစာများ - Forex အခြေခံဆောင်းပါးများ - အဘယ်အရာကို Forex Trading အတွက်ပြန့်နှံ့?
ပျံ့နှံ့ခြင်းသည် Forex Trading ၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံးဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ အယူအဆ၏အဓိပ္ပါယ်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးအတွဲတစ်ခုမှာစျေးနှုန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ခုမှာ Bid ဈေး၊ နောက်တစ်ခုမှာ Ask စျေးဖြစ်သည်။ ပြန့်ပွားသည် Bid (ရောင်းဈေး) နှင့် Ask (၀ ယ်သည့်စျေးနှုန်း) အကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးရှုထောင့်အရပွဲစားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေရှာရသည်။
ပွဲစားများသည်ကုန်သည်များအား ၄ င်းတို့ ၀ ယ်ရန်အတွက်ပေးသည့်ငွေထက်ပိုပြီးရောင်းရန်ငွေရှာကြသည်။
ပွဲစားများသည်ကုန်သည်များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့ရောင်းရန်အတွက်ပေးသည့်ငွေထက်နည်းသောငွေကြေးကိုသာဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ငွေရှာကြသည်။
ပြန့်ပွားမှုကိုငွေကြေးစုံတွဲတစ်တွဲ၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအသေးစားဖြစ်သော pips များဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် ၀.0.0001 (ကိုးကားစျေးနှုန်းအပေါ်စတုတ္ထဒdecimalမအချက်) နှင့်ညီသည်။ ဂျပန်ယန်းအတွဲများ၌အဓိကဒြပ်ထုအများစုအတွက်ဤအချက်သည်မှန်သည်။
ကျယ်ပြန့်လာသောအခါ "Bid" နှင့် "Ask" အကြားခြားနားချက်ကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားပြီးငွေဖြစ်လွယ်မှုနိမ့်ကျလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အနိမ့်ပြန့်ပွားနိမ့်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်မြင့်မားသောငွေဖြစ်လွယ်ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်တစ် ဦး ကုန်သွယ်သောအခါကုန်စည်ကုန်ကျမှုသည်နည်းလိမ့်မည် ငွေကြေးတစ်စုံ တင်းကျပ်စွာပြန့်နှံ့နှင့်အတူ။
များသောအားဖြင့်ငွေကြေးအတွဲများသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ကော်မရှင်မရှိပါ။ ဒါကြောင့်ပြန့်ပွားမှုဟာကုန်သည်တွေအတွက်တစ်ခုတည်းသောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်တယ်။ Forex ပွဲစားအများစုသည်ကော်မရှင်မပေးရ၊ ဒီတော့သူတို့ကပြန့်ပွားတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေ။ ပြန့်ပွားမှုပမာဏသည်စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှု၊ ပွဲစားအမျိုးအစား၊ ငွေကြေးအတွဲစသည်စသည့်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပြန့်ပွားမှုညွှန်းကိန်းကိုများသောအားဖြင့်“ Ask” နှင့်“ Bid” ဈေးနှုန်းများအကြားပျံ့နှံ့သွားသည့်လမ်းကြောင်းကိုပြသသောဂရပ်ပုံပေါ်တွင်ကွေးပုံစံဖြင့်တင်ပြသည်။ ဤသည်ကကုန်သည်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှငွေကြေးအတွဲ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုမြင်ယောင်နိုင်စေသည်။ အရည်များဆုံးအတွဲများသည်တင်းကျပ်စွာပျံ့နှံ့နိုင်သည်၊
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ပြန့်ပွားမှုသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခု၏စျေးကွက်အရည်အချင်းပေါ်မူတည်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအထူးသဖြင့်ငွေကြေးအတွဲတစ်ခု၏လည်ပတ်ငွေများလေ၊ ဥပမာ၊ EUR / USD အတွဲသည်အများဆုံးရောင်းဝယ်သောအတွဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, EUR / USD pair တစုံအတွက်ပြန့်ပွားသည်အခြားအားလုံးအတွက်အားလုံးနိမ့်သည်။ ထိုအခါ USD / JPY၊ GBP / USD၊ AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD စသည့်အဓိကအဓိကအတွဲများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အားလုံးဖြစ်သောကြောင့်ထူးခြားဆန်းပြားအားလုံးအတွက်ပါးလွှာငွေဖြစ်လွယ်၏။
ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက်ကာလတိုပြတ်တောက်မှုများကိုပြန့်ပွားစေသည်။ ဤအချက်သည်မက်ခရိုစီးပွားရေးအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ကမ္ဘာကြီးတွင်အဓိကအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများပိတ်ထားသည့်အချိန်များသို့မဟုတ်အဓိကဘဏ်ရုံးပိတ်ရက်များကဲ့သို့သောအခြေအနေများကိုရည်ညွှန်းသည်။ တူရိယာများ၏ငွေဖြစ်လွယ်မှုကပြန့်ပွားမှုအတော်အတန်ကြီး / ငယ်မလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သည်။
စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုက Forex တွင်ပြန့်ပွားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငွေကြေးအတွဲများသည်အဓိကစီးပွားရေးသတင်းများထွက်ပေါ်လာချိန်တွင်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြန့်ပွားမှုကိုလည်းထိုအချိန်ကထိခိုက်နေကြသည်။
ပြန့်ပွားမှုများလွန်းသည့်အခြေအနေမျိုးကိုသင်ရှောင်ရှားလိုပါက Forex သတင်းပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ရှုသင့်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအသိပေးရန်နှင့်ပြန့်ပွားမှုကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လယ်ယာမဟုတ်သောလုပ်ခလစာအချက်အလက်များသည်စျေးကွက်တွင်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များသည်ထိုအချိန်ကအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန်ကြားနေနိုင်ကြသည်။ သို့သော်မျှော်လင့်မထားသောသတင်းသို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုစီမံရန်ခက်ခဲသည်။
မြင့်မားသောကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်အတူငွေကြေးပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသည် အနိမ့်ပျံ့နှံ့ ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ဒေါ်လာအားလုံးအတွက်အဖြစ်။ ဤအတွဲများသည်ငွေဖြစ်လွယ်မှုမြင့်မားသော်လည်းစီးပွားရေးသတင်းများအရဤအတွဲများသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
ဆစ်ဒနီ၊ နယူးယောက်နှင့်လန်ဒန်အစည်းအဝေးများကဲ့သို့သောအဓိကစျေးကွက်အစည်းအဝေးများတွင်ပြန့်နှံ့မှုနှုန်းနိမ့်ကျနေနိုင်သည်။ ပြန့်ပွားမှုသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ငွေကြေး ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေး ၀ ယ်လိုအားမြင့်မားခြင်းကြောင့်ကျဉ်းမြောင်းသောပြန့်ပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထဲမှာ STP မော်ဒယ်၎င်းသည် variable သို့မဟုတ် fixed spread ဖြစ်နိုင်သည်။
In ECN ပုံစံ, ငါတို့ကသာစျေးကွက်ပျံ့နှံ့ရှိသည်။
အဆိုပါပြန့်ပွား fixed သို့မဟုတ် variable ကိုနိုင်ပါတယ်။ လိုပဲ, ညွှန်းကိန်းအများအားဖြင့်ပျံ့နှံ့ fixed ပါပြီ။ Forex အတွဲများအတွက်ပျံ့နှံ့ variable ကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လေလံဆွဲခြင်းနှင့်ဈေးနှုန်းများမေးသောအခါပြောင်းလဲခြင်းသည်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။
1. Fixed ပြန့်ပွား
ပြန့်ပွားပွဲစားများကသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်စျေးကွက်အခြေအနေမည်သို့ပင်ဆိုစေသူတို့မပြောင်းပါဘူး။ ငွေဖြစ်လွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းအန္တရာယ်သည်ပွဲစား၏ဘက်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပွဲစားများသည်ဤအမျိုးအစားတွင်မြင့်မားစွာပျံ့နှံ့နေသည်။
စျေးကွက်ဖော်ဆောင်သူသို့မဟုတ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်စားပွဲစားများသည်သတ်မှတ်ထားသောပြန့်ပွားမှုကိုပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပွဲစားများသည်ငွေထုတ်ချေးသူများထံမှရာထူးကြီးများကိုဝယ်ယူပြီး၊ ထိုရာထူးများကိုလက်လီရောင်းဝယ်သူများအားသေးငယ်သောအပိုင်းများဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ ပွဲစားများသည်အမှန်တကယ်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်စားပွဲတစ်ခု၏အကူအညီဖြင့် Forex ပွဲစားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပြန့်ပွားမှုများကို၎င်းတို့ဖောက်သည်များပြသသည့်စျေးနှုန်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သဖြင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်းသည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းမှလာသည်နှင့်အမျှကုန်သည်များသည်မကြာခဏတောင်းဆိုခြင်းပြotesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။ မတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားမှုကြောင့်ငွေကြေးအတွဲများစျေးနှုန်းများလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည့်အချိန်အချို့ရှိသည်။ ပြန့်ပွားမှုမပြောင်းလဲသောကြောင့်ပွဲစားသည်လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်အညီညှိနှိုင်းနိုင်ရန်အတွက်ပြန့်ပွားမှုကိုတိုးချဲ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်တိကျသောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ကြိုးစားလျှင်ပွဲစားသည်အမှာစာကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲပွဲစားကသင့်အားသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းကိုလက်ခံရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
ဈေးနှုန်းပြောင်းသွားပြီ၊ ဈေးနှုန်းအသစ်ကိုလက်ခံဖို့သင်သဘောတူသည်ဆိုပါကသင့်အားအရောင်းအ ၀ ယ်ပြသမှုတွင်တောင်းခံလွှာ၏ message ကိုပြလိမ့်မည်။ ဒါဟာများသောအားဖြင့်သင့်မှာယူထားတဲ့စျေးနှုန်းထက်ပိုဆိုးတဲ့စျေးနှုန်းဖြစ်တယ်။
စျေးနှုန်းများသည်အလွန်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားသွားသောအခါ slippage ပြfaceနာကိုသင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ပွဲစားသည်သတ်မှတ်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်၏စျေးနှုန်းသည်သင့်ရည်ရွယ်ထားသောစျေးနှုန်းနှင့်မတူနိုင်ပါ။
ဤအမျိုးအစားတွင်, ပြန့်ပွားစျေးကွက်ကနေလာနှင့်ပွဲစားက၎င်း၏ထိပ်ပေါ်မှာ၎င်း၏န်ဆောင်မှုများအတွက်စွဲချက်။ ဤကိစ္စတွင်ပွဲစားများသည်ငွေဖြစ်လွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်အန္တရာယ်မရှိပါ။ မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများမှအပကုန်သည်များသည်များသောအားဖြင့်ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့သည်။
Non- ဆက်ဆံစားပွဲစားပွဲစားများ variable ကိုပြန့်ပွား။ ထိုသို့သောပွဲစားများသည်ငွေများရောင်း ၀ ယ်မှုပေးသူများထံမှသူတို့၏ငွေကြေးဈေးနှုန်းများကိုရရှိသည်။ ပွဲစားများသည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲကုန်သည်များထံသို့စျေးနှုန်းများကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်စျေးကွက်၏မတည်ငြိမ်မှုနှင့်ငွေကြေး ၀ ယ်လိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်၍ ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ပြန့်ပွားခြင်းများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။
ပုံသေနှင့် variable ကိုပျံ့နှံ့၏နှိုင်းယှဉ်
Fixed နှင့် Variable spreads များ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များအားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ပြန့်ပွားမှုနောက်ဆုံးဈေးအများနှင့်လေလံစျေးနှုန်းအားဖြင့်စျေးနှုန်းကိုးကားအတွင်းတွက်ချက်သည်။ နောက်ဆုံးကြီးမားသောနံပါတ်များသည် ၉ နှင့် ၄ ဖြစ်သည်။
သင် CFD မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အလောင်းအစားစာရင်းဖွင့်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ခြင်းကိုသင်ပေးရမည်။ ဒါကကုန်သည်တွေဟာ CFDs တွေရောင်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာကော်မရှင်ပေးရတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်မှုစတင်ခြင်းနှင့်ထွက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ကျသင့်သည်။ တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားကုန်သည်များအတွက်အလွန်အမင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်
ဥပမာ: GBP / JPY စုံတွဲအတွက် ၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းမှာ ၁၃၈.၇၉၂ ဖြစ်ပြီးတောင်းဆိုသည့်စျေးမှာ ၁၃၈.၈၄၇ ဖြစ်သည်။ ၁၃၈.၈၄၄ မှ ၁၃၈.၈၄၇ ကိုနုတ်လျှင် ၀.၅၅၅ ရတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းကိုးကားအရေအတွက်ပျံ့နှံ့၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သကဲ့သို့, ထို့ကြောင့်ပြန့်ပွားသည် ၅.၅ pips နှင့်ညီသည်။
သင်လက်ခံနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် အနားသတ် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလျှင် Forex သိသိသာသာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အဆိုးဆုံးကိစ္စဖြစ်ပါသည်လျှင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ရာထူးအလိုအလျှောက်ဖျက်သိမ်းခံရ။ သို့သော်အကောင့်တန်ဖိုးသည် ၁၀၀% margin လိုအပ်ချက်ထက်လျော့နည်းမှသာ margin ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ သင်၏အကောင့်သည် ၅၀% လိုအပ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါကသင်၏ရာထူးအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
Forex ပြန့်ကားခြင်းဆိုသည်မှာဈေးနှုန်းနှင့်ဈေးနှုန်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည် Forex စုံတွဲ။ များသောအားဖြင့်၎င်းကို pips ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ကုန်သည်များအဘို့အပြန့်ပွားမှုကွဲပြားမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောအဘယ်အချက်များသိရန်အရေးကြီးသည်။ အဓိကငွေကြေးမြင့်မားသောကုန်သွယ်မှုပမာဏရှိသည်; လျော့နည်းငွေဖြစ်လွယ်ကြားတွင်ထူးခြားဆန်းပြားအားလုံးအတွက်ကျယ်ပြန့်ပျံ့နှံ့နေစဉ်ဤအရပ်မှသူတို့ရဲ့ပြန့်ပွားနိမ့်သည်။